Wallee Kuma Iibsado (Juxa)! W/Q: Maxamed Sharma’arke | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Wallee Kuma Iibsado (Juxa)! W/Q: Maxamed Sharma’arke
Maalin ayaa uu Juxa doonay in uu soo iibsado dameer, dabadeed waxa uu u dhaqaaqay jihadii uu suuqu ka xigay. Wax uu suuqa dhex meeraysto oo uu kolba dameer eegaba, ugu dambayntii waxa uu helay dameer uu ku qancay, waana uu soo dul istaagay. Juxa waxa uu bilaabay in uu dameerka baayaco, waxaana ay gaadhay in ay Juxa iyo ninkii dameerka lahaa gor-gortan badan oo dhinaca sicirka ah galaan. Kadib markii ay in muddo ah gor-gortamayeen Juxa iyo ninkii dameerka iibinayey, ayaa uu Juxa ugu dambayntii ku yidhi ninkii: “Adeer intaas ayaan haystaa, ee hadii aad igaga iibinayso dameerka igaga iibi, hadii kalena waa aan iska tegayaa ee ii sheeg”. Dabadeed ninkii dameerka iibinayey ayaa muddo kooban yar fikiray, kadibna waa uu ogolaaday, sidaas ayaanu Juxa dameerkii ku soo kaxaystay. Hadaba markii uu Juxa soo kaxaystay dameerkii, ayaa ay laba tuug arkeen, waxaana ay ku heshiiyeen in ay Juxa dameerka ka xadaan. Dabadeed mid ka mid ah tuugtii ayaa soo dhuuntay, dabadeedna dameerkii ayaa uu korka ka fuulay, waxaana uu ka furay xadhigii uu Juxa dameerka ku hogaaminayey. Dabadeed Juxa si aanu u dareemin in dameerkii laga furay xadhiga, ayaa waxa uu tuuggii qoorta u geliyey xadhigii uu dameerka ka furay ninkii kale ee isaguna tuugga ahaa, sidaas ayaanu dameerkii ku kaxaystay, oo uu ku xaday. Juxa oo aan isagu la socon halka ay xaaladi marayso ayaa socodkiisii iska sii watay, waxaana xadhigiisa ku xidhnaa mid ka mid ah labadii tuug. Hadaba marka ay dadku arkaan Juxa oo nin kale sidii dameeraha xadhig ku hogaaminaya waa ay la yaabayeen, oo waa ay ku qoslayeen, Juxana waxa uu u haystay in dameerka uu soo iibsaday loo qushuucsanyahay oo uu yahay dameer qurux badan, illeen ma oga in mar horeba dameerkii xadhiga laga furay, oo nin loogu xidhaye!
Dabadeed markii uu Juxa gaadhay gurigiisii, ayaa uu xagga dambe soo daymooday, waxaana uu arkay nin ku xidhan xadhigiisii! Juxa ayaa yaabay, waxaana uu ku yidhi: “Waar maxaad ahayd adiguna”. Dabadeedna tuugii oo goorahanba ka fikirayey wixii uu Juxa ku odhan lahaa, ayaa inta uu muddo gaaban iska oohisiiyey, haddana aamusay oo ilmadii iska tiray, ayaa uu hadalkiisii ku bilaabay: “Mudanahaygiiyow, waxa aan ahay nin jaahil ah, waxa aan ka cadhaysiiyey hooyaday”. Dabadeed Juxa oo sugi kari waayey hadalkiisii ayaa si cadhaysan ugu yidhi: “oo dabadeedna”. Kadib waxa hadalkii ku soo noqday ninkii tuugga ahaa, waxaana uu yidhi: “kadib markii aan hooyaday ka cadhaysiiyey, ayaa ay ilaahay ka bariday hooyaday in uu ilaahay iga dhigo dameer. Ilaahayna waa uu ka aqbalay ducadeedii, waxa aanu iga dhigay dameer. Dabadeed walaalkay oo iga weyn ayaa arkay sida ay wax u dhaceen, waxaana uu doonay in uu dameerkii uu ilaahay iga dhigay xaafadayada ka fogeeyo, waxaana uu I keenay suuqa, ugu dambayntiina adiga ayaa I soo iibsaday, dabadeed barakadaada iyo fadliga uu ilaahay ku siiyey ayaan dib ugu soo noqday banii-aadamkii aan berigii hore ka midka ahaa”. Kadib markii uu ninkii tuugga ahaa hadalkiisii dhammaystay, ayaa uu isla markiiba ku booday gacantii Juxa, waana uu dhunkaday isaga oo u mahad-celinaya Juxa.
Intaas kadib, Juxa waa uu rumaystay ninkii tuugga ahaa, dabadeedna waa uu iska sii daayey. Waxaana uu kula dar-daarmay in aanu hooyadii si xun ula dhaqmin, ee uu ilaaliyo, isla markaana uu daryeelo, wax kasta oo ay uga baahatana uu u qabto. Ugu dambayna Juxa waxa uu ninkii u sheegay in uu hooyadii duco iyo alle bari ka dalbado. Sidii ayaanu ninkii tuugga ahaa ku baxsaday.
Haddaba maalintii dambe ayaa uu Juxa mar kale suuqii yimid, isaga oo doonaya in uu dameer kale iibsado. Dabadeed waxa uu si kadis ah u arkay dameerkii uu shalay iibsaday oo hadana mar labaad suuqa lagu iibinayo. Juxa oo aaminsan in uu dameerkani qof caadi ah yahay, ayaa u soo dhawaaday dameerkii, dabadeed waxa uu qabtay dhegtii dheerayd ee dameerka, hoos ayaanu ula hadlay isaga oo ku leh: “waxa muuqata in aanad hadalkaygii maqlin oo aad mar labaad hooyadaa dhibtay, Wallee in aanan ku iibsanayn mar dambe”. Juxa waxa uu markan ka baqanayey in uu dameerku nin ku noqon doono, oo uu sidi shalay oo kale khasaarin doono lacagtiisa.
W/Q: Maxamed Sharma’arke